Olee Otú Ị Ga-esi Bịaruo Chineke Nso? | Ozi Ọma
1. Chineke ọ̀ na-anụ ekpere niile?
Chineke chọrọ ka mmadụ niile bịaruo ya nso. Otú ha ga-esi eme ya bụ ikpegara ya ekpere. (Abụ Ọma 65:2) Ma, ọ bụghị ekpere niile ka ọ na-anụ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nwoke na-emegbu nwunye ya, Chineke nwere ike ghara ịna-anụ ekpere ya. (1 Pita 3:7) Mgbe ụmụ Izrel kpọchiri ntị na-eme ihe ọjọọ, Chineke egeghị ntị n’ekpere ha. N’eziokwu, ọ bụ ùgwù ka Chineke kwanyeere anyị, hapụ anyị ka anyị na-ekpeku ya ekpere. Ma, ọ bụrụ na mmadụ mere ezigbote mmehie ma chegharịa, Chineke ga-anụ ekpere ya.—Gụọ Aịzaya 1:15; 55:7.
2. Olee otú anyị kwesịrị isi kpegara Chineke ekpere?
Ekpere bụ otu n’ime ụzọ anyị si efe Chineke. N’ihi ya, ọ bụ naanị Jehova, Onye kere anyị, ka anyị kwesịrị ikpegara ekpere. (Matiu 4:10; 6:9) Ebe ọ bụ na anyị ezughị okè, anyị kwesịrị ikpegara Chineke ekpere n’aha Jizọs n’ihi na Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị. (Jọn 14:6) Jehova achọghị ka ekpere anyị bụrụ nke anyị bu n’isi ma ọ bụ nke e dere n’akwụkwọ. Kama, ọ chọrọ ka anyị na-agwa ya ihe si anyị n’obi.—Gụọ Matiu 6:7; Ndị Filipaị 4:6, 7.
Chineke na-anụdị ekpere anyị kpere n’ime obi anyị. (1 Samuel 1:12, 13) Ọ gwara anyị ka anyị na-ekpe ekpere mgbe niile. Anyị nwere ike ikpe ekpere mgbe anyị chọrọ ịlaba, mgbe anyị tetara, mgbe anyị chọrọ iri nri, nakwa mgbe nsogbu bịaara anyị.—Gụọ Abụ Ọma 55:22; Matiu 15:36.
3. Gịnị mere Ndị Kraịst ji ezukọta amụ Okwu Chineke?
Ịbịaru Chineke nso adịghị mfe n’ihi na anyị bi n’ụwa ebe ọtụtụ ndị na-ekweghị na Chineke. A gwa ha na Chineke kwere nkwa iweta udo n’ụwa a, ha ejiri ya mere ihe ọchị. (2 Timoti 3:1, 4; 2 Pita 3:3, 13) N’ihi ya, ọ dị mkpa ka anyị na Ndị Kraịst ibe anyị na-ezukọ, ka anyị nwe ike ịna-agbarịta ibe anyị ume.—Gụọ Ndị Hibru 10:24, 25.
Ọ bụrụ na anyị na ndị hụrụ Chineke n’anya abụrụ enyi, ha ga-enyere anyị aka ịbịaru Chineke nso. N’ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova, ị ga-ahụ ndị nwere okwukwe na Chineke. Ha ga-enyekwara gị aka ka okwukwe i nwere na Chineke sikwuo ike.—Gụọ Ndị Rom 1:11, 12.
4. Olee otú ị ga-esi bịaruo Chineke nso?
Ihe ga-enyere gị aka ịbịaru Jehova nso bụ ichebara ihe ndị ị mụtarala n’Okwu ya echiche. Chebara ihe ndị Chineke na-eme echiche, chebara ndụmọdụ ya echiche, ya na nkwa ndị o kwere. Ikpe ekpere na ichebara ihe ndị a echiche ga-eme ka anyị ghọtakwuo otú Chineke hụruru anyị n’anya nakwa ụdị amamihe o nwere.—Gụọ Jọshụa 1:8; Abụ Ọma 1:1-3.
Ọ bụrụ na i nwere okwukwe na Chineke, ị ga-abịaru ya nso. Ma, i kwesịrị ịna-eme ka okwukwe gị na-esikwu ike. Otú ị ga-esi eme ya bụ ịna-echebara ihe ndị e ji Baịbụl kụziere gị echiche.—Gụọ Matiu 4:4; Ndị Hibru 11:1, 6.
5. Olee uru ịbịaru Chineke nso ga-abara gị?
Jehova anaghị eji ndị hụrụ ya n’anya egwu egwu. Ọ na-enyere ha aka ka ha ghara ime ihe ọ bụla ga-eme ka okwukwe ha nyụọ ka ọkụ. Ọ chọghịkwa ka ndụ ebighị ebi o kwere ha ná nkwa kwaa ha. (Abụ Ọma 91:1, 2, 7-10) Ọ na-adọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ibi ụdị ndụ nwere ike ịkpatara anyị ọrịa ma ọ bụ nke ga-eme ka anyị ghara inwe obi ụtọ. Jehova na-akụziri anyị otú kacha mma anyị kwesịrị isi na-ebi ndụ.—Gụọ Abụ Ọma 73:27, 28; Jems 4:4, 8.
Bịaruo Chineke Nso n’Ekpere
mailto:?body=Olee Otú Ị Ga-esi Bịaruo Chineke Nso?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012193%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Ị Ga-esi Bịaruo Chineke Nso?